AMISOM oo qiratay in dad shacab ah ku dishay Sh/hoose | Gaaloos.com
Home » Layaab » AMISOM oo qiratay in dad shacab ah ku dishay Sh/hoose
AMISOM oo qiratay in dad shacab ah ku dishay Sh/hoose
Afhayeenka Amisom Col Joe Kibet oo la hadlay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa sheegay in ay ka xunyihiin dhacdadii maanta ka dhacday inta u dhaxaysa deegaanka Buulo mareer iyo Gol-weyn oo ciidankooda rasaas ay ku fureen gaari ay la socdeen dad shacab ah kuna dhinteen afar ruux oo rayida.
Afhayeenka ayaa ka hadlay qaabka ay wax u dhaceen waxuuna inoo sheegay in ay aheyd meesha ay dhac dadani ka Dhacday meel cidlo ah ayna ka jirtay cabsi Amni.
“gaariga ayay ciidankeena la hadleen waxayna ku yiraahdeen istaag wuuna maqli waayay darawalkii gaariga waxayna u qaateen ciidankeena inuu weerar ku yahay, sidaas ayuuna falkaasi ku dhacay”, sidaas waxaa yiri afhayeenka Amisom.
Afhayeenka wuxuu intaas ku daray in hadda ay ku jiraan baaritaan la xariira sidii arintaasi ay u dhacday, ayna iska kaashan doonaa saraakiisha booliiska soomaaliyeed.
Ciidamada AMISOM ayaa howlgal ciidan ka wada deeganada Gobalka Shabeellaha Hoose, halkaas oo mararka qaar ay jidadka ugu galaan kooxda Al-shabab taas oo ku dhalisa ciidamada AMISOM marka ay waddooyinka socdaan in aan gawaarida dadweynaha ku soo dhawaan.
Title: AMISOM oo qiratay in dad shacab ah ku dishay Sh/hoose
Posted by galmada Net, Published at 12:06 AM and have 0 comments